Burmese Traveler: 2009
Jurong Bird Park သို့အမှတျတရ
စင်ျကာပူ Jurong Bird Park ကိုတော့ မှတျမှတျရရ 10. February. 2008 တုနျးကရောကျခဲ့ပါတယျ။ Jurong Bird Park ကို ဒေါကျတာ Goh Keng Swee ကနပွေီး 1968 ခုနှဈမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒေါကျတာ Goh ဟာ Zoologi Garden ကိုလညျပတျရငျးနဲ့ ငှကျတှလှေတျလပျစှာ ပြံသနျးနိုငျမယျ့ ငှကျလှောငျခြိုငျ့ ကွီးကွီး တညျဆောကျဖို့ စိတျကူးရခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုတညျဆောကျနိုငျဖို့အတှကျ စကျမှုဇုံတှနှေငျ့ ကငျးလှတျပွီး သဘာဝအလြှောကျ အပနျးဖွေ အနားယူနိုငျမယျ့ Jurong Hill (Bukit Perepok) နရောကို 1968 ခုနှဈမှာ ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။
Labels: Remembrance, Travel Singapore
ရန်ကုန်မြို၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင်၂၆၀ အကွာ အင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိ ကိုကိုးကျွန်းသို့ မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘော လုပ်ငန်းပိုင် သံလွင်သင်္ဘောဖြင့် အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်ကို စတင်ပြေးဆွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကိုးကျွန်းခရီးစဉ်ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့မှာ စတင်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကနေ ညနေ၃နာရီမှာ စတင်ထွက်ခွာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မှ စတင်ထွက်ခွာချိန်ကစပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာ ကာရာအိုကေ၊ မျက်လှည့် စသည့် ဖျော်ဖြေမှုတွေပါဝင်ပြီး၊ ကိုကိုးကျွန်းကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လိပ်ဥတူးဖေါ်ခြင်း၊ အမြင့်ပေ ၁၉၅ပေရှိပြီး သက်တမ်း ၁၄၀ကျော် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မီးပြတိုက်နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ကျွင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကတုတ်ကျွင်းတွေကို သွားရောက် လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ ရန်ကုန်ကနေပြီး ကိုကိုးကျွန်းကို နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့မှာ စတင်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး ၂၃ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိမယ့် သုံးညအိပ် လေးရက် ခရီးစဉ်ပါ။
ထို့အပြင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကိုကိုးကျွန်း အလှအပအား ခံစားနိုင်မည့်ခရီးစဉ်ကို ပုံမှန်အပျော်စီး ခရီးစဉ်အဖြစ် ပြေးဆွဲသွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒီကိုကိုးကျွန်း ခရီးစဉ်မှာတော့ ခရီးသည်ဦးရေ အယောက် ၄၀၀၀န်းကျင် လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။
ကိုကိုးကျွန်းအား Google Earth မှမြင်ရစဉ်
ကိုကိုးကျွန်းစုသည် ၁၈ရာစုတွင် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏ တည်ရှိခဲ့သည်။ 1857 ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ၌ ပုန်ကန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နယ်ချဲ့ဗြိတိလျှတို့သည် အက်ဒမန်ကျွန်းတောင်ပိုင်းရှိ ပို့ဘလဲရားတွင် 1858 ခုနှစ်၌ အကျဉ်းထောင် ဆောက်လုပ်၍ ပုန်ကန်သူများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့ရာ စားနပ်ရိက္ခာ သိုလှောင်ရာ နေရာအဖြစ် ကိုကိုးကျွန်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ 1882 ခုနှစ်တွင်မှု ကိုကိုးကျွန်းမှာ မြန်မာ့ပိုင်နက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း၌ ဂျပန်တို့သည် မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော အက်ဒမန်ကျွန်းနှင့် နီကိုဘာကျွန်းတို့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ 1948 ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိသောအခါ ကိုကိုးကျွန်းစုအား ဗြိတိလျှက လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကိုကိုးကျွန်းစုအား ပဲခူးတိုင်း ဟံသာဝတီခရိုင်အတွင်း ထားရှိခဲ့ပြီးနောက် 1999 ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်တစ်ခုအဖြစ် သက်မှတ်ခဲ့သည်။
Refer : Weekly Eleven
on November 02, 2009 No comments:
ESET NOD32 အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ESET NOD32 Antivirus4သုံးလိုသူများအတွက် Username & Password Key တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူများတွေ Kaspersky Antivirus ကို အသုံးများနေချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ NOD32 ကိုပဲ အတော်လေး သဘောကျမိပါတယ်။ တခြား Antivirus Software တွေဖြစ်တဲ့ Norton Antivirus, McAfee, Kaspersky, Avara, Panda, BitDefender နဲ့ AVG စတဲ့ Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲလ် အတော်များများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ NOD32 ကိုပဲ ပိုသဘောကျမိပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို Install ဖို့ကလဲ အချိန်တိုတိုအတွင်း အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သလို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကိုလဲ တခြား Antivirus Software တွေလို လေးလံစေခြင်းမရှိပါဘူး။ Security အတွက်လဲ အတော်လေး စိတ်ချရပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ရဲ့ လက်ရှိ Window Update ဖြစ်မဖြစ်ကအစ သတိပေးတဲ့စနစ်လဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ESET NOD32 Antivirus4ကို Download လုပ်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ အခမဲ့ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူကတော့ ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့စမ်းသုံးခိုင်းတာပါ။ Downlad လုပ်တဲ့နေရာမှာ မိမိအသုံးပြုတဲ့ PC User အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး 32bit နဲ့ 64bit ဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်။ မိမိ PC နဲ့အဆင်ပြေမယ့် ဖိုင်ကို Download လုပ်ပါ။ ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ 32bit ကိ်ု Download လုပ်ပြီးသုံးတာမရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် Window က 64bit အမျိုးအစားမို့လို့ပါ။ အစမ်းသုံးခွင့်ကာလ ပြည့်လို့ ဆက်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Full Version အတွက် Key ကိုဝယ်သုံးရမှာပါ။ တကယ်လို့ ၀ယ်မသုံးချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ အခမဲ့ရနိုင်မဲ့ Key ကို ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်မှာ ရှာတင်ပေးပါ့မယ်။ ယခုလောလောဆယ်တော့ လက်ရှိသုံးလို့ရနေတဲ့ လိုင်စင် Key တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Key File ကိုသွင်းပြီး Update လုပ်လိုက်ပါ။ ရက်သုံးဆယ် အစမ်းသုံးခွင့်ကနေပြီး Full Version အဖြစ်နဲ့စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး License Valid Date ကိုလဲ Protection status မှာ ဖေါ်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မိမိလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Key က Valid Date ကုန်သွားခဲ့ရင်လည်း Key အသစ်ကိုပြန်သွင်းပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင် Key ဆိုတာကတော့ ဥပမာအားဖြင့် (Username: EAV-23624052 Password: 2nc8p56xnb) ဆိုတာမျိုးပါ။ NOD32 ကို Download & Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Software ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Update ကိုရွေးပါ။ အဲဒီ့မှာ Username and Password Setup ဆိုတဲ့နေရာကို Click လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီ့မှာ Username & Password သွင်းရမယ့် ဘောက်တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့မှ ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်မှာ ပေးထားတဲ့ Username & Password တွေထဲက မိမိအဆင်ပြေနိုင်မယ့် Key တစ်ခုကို သွင်းပါ။ ပြီးရင်တာ့ Ok နှိပ်ပြီး Update ကို 100% ပြီးသည်အထိလုပ်ပါ။ 100% ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Virus signature update လုပ်ပြီးသား Full Version ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုတော့ အောက်မှာ Video File အနေနှင့်ရော PDF File အနေနှင့်ရော နှစ်မျိုးလုံး ပြသထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ။
Click here to view: Installing Guide Book
Nod32 Username | Password (29-10-2009)
Expiry Date: 12.01.2010
Expiry Date: 16.01.2010
Expiry Date: 24.01.2010
Expiry Date: 22.02.2010
Window7နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း
ဒီပို့စ်ကို တင်ဖြစ်တာကတော့ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ Window7ကိုတရားဝင် စတင်ရောင်းချပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတော့ Window7နဲ့အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်ကို သတိရလိုက်မိလို့ပါ။ ကျွန်တော် အရင်သုံးနေတဲ့ PC အဟောင်းလေး မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း Laptop Second Hand တစ်လုံးဝယ်ဖို့ ကိုဝဏ္ဏကိုမေးကြည့်တော့ သူ့အသိတစ်ယောက်ဆီမှာ ရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ရှိတဲ့ Black Gong ကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်။ ဟိုရောက်တော့ ကိုဝဏ္ဏက သူလဲ Notebook အသစ်တစ်လုံး ၀ယ်ထားတယ်ဆိုပြီး Dell အမှတ်တံဆိပ် Notebook တစ်လုံးထုတ်ပြပါတယ်။ သူ့ကွန်ပြူတာကို ဆိုင်ကနေပြီး Window7Update လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီး ဖွင့်ပြတော့ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီ့ Window ကို တော်တော်လေး သဘောကျမိသွားတယ်။ ခဏနေတော့ မြန်မာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ နှစ်ယောက်သား ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ Laptop ကိုသွားကြည့်ကြပါတယ်။ သူပြတဲ့ Second Hand Laptop နှစ်လုံးထဲက P4 တစ်လုံးကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Keyboard ကသိပ်မကောင်းပါဘူး။ Keyboard လဲလို့အဆင်ပြေမလားမေးကြည့်တော့ Keyboard အပိုမရှိဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ အပြင်မှာလဲမယ်ဆိုပြီး ကိုဝဏ္ဏကပဲ သူ့အသိ ကွန်ပြူတာဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်မေးတော့လဲ အဲဒီ့ဆိုင်မှာလဲ အမျိုးအစားတူ Keyboard မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ Keyboard လဲမယ်ဆိုရင်လဲ အနည်းဆုံး RM 50 လောက် ကျသင့်မှာဖြစ်လို့ Second Hand တစ်လုံးတင်ပဲ RM 800 ကျော်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုဝဏ္ဏလို RM 1800 ၀န်းကျင် Notebook အသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ကို အာရုံရသွားမိတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုဝဏ္ဏကို အသစ်ပဲသွားဝယ်ချင်တဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်တော့ မအားလပ်တဲ့ကြားက လိုက်ခဲ့ပေးပါတယ်။ သူ့အသိဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်မျိုးအောင်ကိုပါ အဖေါ်ခေါ်ပြီး ဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံသွားထုတ်ကာ Plaza Low yat ကို ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Plaza Low yat မှာလဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ Notebook တွေလိုက်ရွေးရင်း HPှပြခန်းဘက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ HP လိုချင်တာပဲ ဒါပေမယ့် ပါလာတဲ့ငွေနဲ့ လုံလောက်ပြီး ကောင်းကောင်းသုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်မယ့် Compaq ကိုပဲရွေးလိုက်ရတယ်။ HP ကတော့ RM 2400 ၀န်းကျင်လောက်ရှိတာမို့ အဲလောက်မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ Compaq CQ35 ကတော့မဆိုးလှဘူးပြောရပါမယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Core2Duo အမျိုးအစားမို့လို့ ဈေးလဲသင့်တယ်လို့ထင်တာနဲ့ RM 1999 တန် OS Free Compaq Notebook ကိုပဲဝယ်လိုက်တော့တယ်။ ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ Notebook က DOS Free ဆိုတော့ ဘာ Window မှ မပါပါဘူး။ ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာပဲ အပြင်က RM 10 တန် Window Copy တစ်ချပ်ဝယ်ပြီး တင်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဈေးတွက်တွက်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်မှာတင်ရင်တော့ Original Vista Window ကို RM 300 ထပ်ဆောင်းပေးရမှာလေ။ ကိုဇော်မျိုးအောင်ကလဲ သူ့အိမ်မှာ Window CD ရှိတဲ့အကြောင်းပြောတော့ သူ့အိမ်ရောက်မှပဲ Window တင်တော့မယ်ဆိုပြီး ကိုဇော်မျိုးအောင်အိမ်ကို လိုက်သွားပါတယ်။
သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူ့ဆီမှာရှိတဲ့ Window CD တွေထုတ်ပေးပါတယ်။ Vista သွင်းမလား Window7သွင်းမလားဆိုပြီးပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့Vista Window ကိုသိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ ရုံးကအသစ်ဝယ်လာတဲ့ စက်တွေကိုတောင် Window XP ပဲပြန်ပြောင်းတင်တာပါ။ ကိုဝဏ္ဏကတော့Window7တင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ Window7ကိုသုံးကြည့်ချင်တာကြောင့် Window764bit Ultimate ပဲတင်လိုက်တယ်။ အစအဆုံး အဆင်ကိုပြေလို့။ ထူးဆန်းတာက Serial Key လုံးဝမတောင်းပါဘူး။ ကိုဇောင်မျိုးအောင် မေးကြည့်တော့လဲ အခွေသာဝယ်ထားပြီး တစ်ခါမှ Install မလုပ်ဖူးတော့ မသိဘူးတဲ့။ Serial Key မတောင်းဘူးဆိုတော့ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးဆိုပြီး တထင့်ထင့်နဲ့။ ၀င်းဒိုးတက်တော့မှပဲ စိတအေးရတော့တယ်။ လိုအပ်တဲ့ Software တွေကိုတော့ အိမ်ရောက်မှ ထပ်သွင်းတော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ လိုအပက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေသွင်းပြီး နောက်ဆုံး iTunes လဲသွင်းရော Window က ပြဿနာတက်ပါလေရော။ iTunes လဲ Run ရော စက်ဟမ်းသွားပါတယ်။ ပြန်ပိတ်ပြီးဖွင့်တော့လဲ Window တက်ပြီး Desktop ပေါ်တဲ့အထိတက်လာပြီး ပြန်ပြန်ဟမ်းသွားပါတယ်။ စိတ်လဲ အတော်လေး ညစ်သွားတယ်။ ကိုယ်က ကွန်ပြူတာ သုံးနေပေမယ့် Professional တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ တခြားနည်းလမ်းလဲ မတွေးတတ်တော့ဘူး။ ကွန်ပြူတာ အစစ်စက်စက်လေး ၀ယ်လာပြီး သုံးဖို့တပြင်ပြင် လုပ်နေကာမှ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ရုံးဆင်းတာနဲ့ ကိုဇော်မျိုးအောင်ဆီ ပြန်သွားလိုက်တယ် သူ့ဆီက Window7အခွေပြန်တောင်း format လုပ်ပြီး အစကနေ ၀င်းဒိုးပြန်တင်မှပဲ Serial Key တောင်းပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်တို့သတိမေ့လျှော့နေတာကို သိလိုက်ရတော့တယ်။ အဲဒါက Window တင်ပြီးတာနဲ့ တင်ထားတဲ့ Window ကို Activate လုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက် ၀င်းဒိုးပြန်တင်ပြီးတော့ Window Active ဖြစ်မဖြစ်စစ်ကြည့်တော့ သုံးရက်အတွင်း Activate လုပ်ခိုင်းထားတာတွေ့ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ အင်တာနက်ကနေပြီး Activate လုပ်လိုက်တော့မှ ကျန်တဲ့ဆောဖ်ဝဲလ်တွေကို သွင်းလို့အဆင်ပြေပါတော့တယ်။ အခုချိန်ထိလဲ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
Window7OS က အရင် Window တွေထက်ပိုပြီး တည်ငြိမ်တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ Windows7တင်မယ်ဆိုရင်တော့ 32bit ရော 64bit Edition မှာပါ processor speed 1GHz ပဲလိုပါတယ်။ Processor core ဘယ်နှစ်ခုပါရမယ်လို့လဲ တောင်းဆိုထားတာမရှိပါဘူး။ Ram လိုအပ်ချက်ဟာလည်း 32 bit အတွက် 1GB ဖြစ်ပြီး 64bit အတွက် 2GB ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Vista မှာပါတဲ့ Aero interface ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Ram လိုအပ်ချက်ထပ်တိုးနိုင်ပါတယ်။ Aero interface သုံးမယ်ဆိုရင် Graphic Card Memory 12GB လိုပါတယ် Aero မသုံးရင် မလိုပါဘူး။ DirectX 10 ထွက်နေပေမယ့် Windows7ကတော့ DirectX9ကို Support လုပ်နေတုန်းပါ။ Hard Disk Space လိုအပ်ချက်က 23bit Version အတွက် 16GB ၊ 64Bit Version အတွက် ကတော့ 20GB ဖြစ်ပါတယ်။ OS အရွယ်အစားသေးတဲ့အတွက် အကျိုးထူးတာကတော့ Boot time နဲ့ Installation Time ပါပဲ။ စက်စပြီး Power ဖွင့်ချိန်ကနေ OS သုံးနိုင်တဲ့အချိန်ထိ ကြာချိန် 25min ထက်နည်းမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Installation time ကတော့ပိုပြီး မြန်လာပါတယ်၊ Hardware အဆင့်မြင့်ရင် 15min ထက်တောင်နည်းမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ OS အရွယ်အစားသေးအောင် စီရင်လိုက်ရတဲ့ Windows7ဟာ Vista ထက်ပိုပြီး အဆင့်မြင့်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Vista တဲ့ကတချို့သော အစိတ်အပိုင်းတွေကို Windows7မှာမတွေ့နိုင်ပါဘူး။ အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေက အသွင်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အပြောင်းအလဲတွေကတော့ Start Menu, Windows Ultimate Extra, Inkball နဲ့ Windows Calender တွေကို Windows7မှာ မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ လိုအပ်ရင်တော့ Windows Live Essentials ဆိုတဲ့ Separate Package ထဲကနေ Download ဆွဲယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် Vista သုံးနေသူများ Window7ကိုပြောင်းလဲ အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။ အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကိုဝဏ္ဏနဲ့ ကိုဇော်မျိုးအောင်ကိုလဲ အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Refer : Myanmar IRC
on October 23, 20093comments:
Labels: Remembrance, Technology
Window7တရားဝင်စတင်ရောင်းချ
NEW YORK--Although the official U.S. launch event is still some hours away, Microsoft's Windows7operating system has hit the market, going on sale inanumber of countries across the globe.
Executives from Microsoft have fanned out to celebrate the launch of the company's core product upon which the rest of Redmond's empire has been built. The software giant is counting on favorable reviews and new features to help Windows rebuilt its image in the face ofadisappointing response to Windows Vista. (Credit:Microsoft)
Microsoft is touting the value of Windows in the face ofaresurgent Apple. As part of the launch, Microsoft is celebrating seven days of deals inanumber of key markets, including the United States. Among the specials isa$1,200 package from Hewlett-Packard and Best Buy that includesaNetbook, laptop, desktop, monitor and router as well as in-home installation.
"The Best Buy offer isahome makeover," Microsoft Vice President Tami Reller told CNET News. "For the price ofaMac you haveanew notebook,anew Netbook,anew desktop, andanew router to bring it together with the help of the Geek Squad."
In addition to landing on new PCs, Microsoft will also sell stand-alone versions of Windows7that can be used to upgrade an existing PC. Although Microsoft still offersahalf-dozen different flavors of the operating system in all, Redmond is focusing its energies around two versions--the Home Premium and Professional versions.
It will sell bothafull version of the operating system that can be used on any hardware as well as an upgrade version to be used on existing PCs. Although both Windows XP and Windows Vista can be upgraded to Windows 7, only Vista can be done without backing up and reinstalling both programs and data.
A huge marketing blitz will accompany the debut of Windows 7, with Microsoft continuing its "I'maPC" campaign, by featuring average users who point to various aspects of the new operating system as representing their idea.
Microsoft plans to formalize the launch with an event here with CEO Steve Ballmer (CNET News will cover the 11 a.m. ET event live). The software maker is also opening its first retail store, in Scottsdale, Ariz., as well asa"Windows Cafe" in Paris.
Steven Sinofsky, the divisional president who has spearheaded the development of Windows 7, is presiding over the Japanese launch of the product, while designer Julie Larson-Green is at an event in London.
Microsoft employees in Redmond's Building 37 plan to remotely ring the bell to open Nasdaq trading on Thursday, while Microsoft and its computer maker partners will ring the closing bell.
Hutan Melintang သို့ ခရီးသှားခွငျး
ဒီတဈခေါကျ မလေးနှဈကူး Hari Raya မှာ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီက တဈပါတျ ပိတျမယျဆိုတော့ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ စညျသူနဲ့ ဟူတနျမယျလငျတနျ (Hutan Melintang) ကို ခရီးအတူသှားကွဖို့ တိုငျပငျထားပါတယျ။ စညျသူက ဟာရီရာယာရကျ မတိုငျမှီ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ မလေးရှားကို ဝငျမှဖွဈမယျလို့ ပွောပါတယျ။ သူ့ မလေးရှားဗီဇာက ၁၉ရကျနေ့ သကျတမျး ကုနျတော့မယျတဲ့။ ဒီတော့ ၁၉ရကျနေ့ သောကွာနေ့ ညနပေိုငျးကားနဲ့ မလေးရှားကို ဝငျလာပါတယျ။ ည ၁နာရီလောကျ သူတို့ကားက Bukit Jalil မှာဂိတျဆုံးတာမို့ ကြှနျတျောက Bukit Jalil မှာ သှားကွိုလိုကျပါတယျ။
on September 24, 20094comments:
Genting Highlands သို့ အလညျသှားခွငျး
Skyway to Genting Highlands
Genting Highlands ကိုတော့ မလေးရှားကို ရောကျဖူးသူတိုငျး အတျောမြားမြားသိကွမှာပါ။ မလေးရှားကို ရောကျတဲ့သူတိုငျး Genting Highlands ကို သှားလညျကွတာ မြားပါတယျ။ Genting Highlands ကတော့ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျ 1850m အထကျမှာရှိပွီး မလေးရှားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကြျော တောငျပျေါ Casino ကစားဝိုငျးတှနေဲ့ စညျကားနတေဲ့ နရောတဈခုလဲ ဖွဈပါတယျ။ ကာစီနို ကစားဝိုငျးတှအေပွငျ ကစားကှငျးတှေ၊ ရှော့ပငျး စငျတာတှနေဲ့ စညျကားလှတဲ့ နရောဖွဈပါတယျ။ တောငျပျေါမှာတော့ အေးမွတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ လှပတဲ့ တောငျပျေါရှုခငျးတှကေို ခံစားနိုငျပါတယျ။
ခုတလော အလုပ်များနေတာရော အရင် ကွန်ပြူတာ အဟောင်းလေးကလဲ မရှိတော့တာရော နှစ်ခုလုံးကြောင့် ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်ဘူး။ မနေ့ကမှ အွန်လိုင်းက ညီမတစ်ယောက်က ဘလော့ခ်ကို ၀င်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်မှာ တင်ပေးဖို့ သူပေးထားတဲ့ ကဗျာကို မတင်ရသေးတာ သတိရသွားတယ်။ သူကဗျာက ခေါင်းစဉ် မတပ်ရသေးတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ကဗျာနဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ထင်တဲ့ ခေါင်းစဉ် ပေးလိုက်တယ် ကဗျာခေါင်းစဉ်က "အလွမ်းရင်ခွင်" တဲ့။
ရေးသားသူ - ယုယ
on September 10, 20094comments:
ကျွန်တော် ၁၀ တန်းနှစ် လောက်ကပါ။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက 2000 ခုနှစ် လောက်ပေါ့။ ကျွန်တော်ရယ် သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ထက်မြတ်သူ၊ သန်းနိုင်နှင့် ပြည်သိန်းအောင်တို့ဟာ တစ်နေ့မှာ ဆံပင်ညှပ်ကြမယ်ဆိုပြီး ကျိုက်ကဆံထဲက အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း တာမွေ အထက(၃) ကျောင်းနားမှာ ရှိတဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ သွားညှပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ အတူတူ သွားကြတယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ သန်းနိုင်ကတော့ အဲဒီ့နေ့က ဆံပင်မညှပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ထက်မြတ်သူနဲ့ ပြည်သိန်းအောင်တို့ပဲ ညှပ်ကြတာပါ။ ကျွန်တော်ရယ် သန်းနိုင်ရယ်က သူတို့ ဆံပင်ညှပ်တာကို ဘေးမှာ ထိုင်စောင့်ပေးနေတာပါ။
ထက်မြတ်သူက အရင်ဆုံး ဆံပင်ညှပ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ရုပ်ရှင်မင်းသား ဒွေးက အရမ်းပဲ နာမည် ကျော်ကြားနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ထက်မြတ်သူက မင်းသား ဒွေးရဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို အားကျတာကြောင့် အရင်ညှပ်နေကျ ပုံစံအတိုင်း ဒွေးကေ ညှပ်တယ်ပေါ့။ သူဆံပင်ညှပ်တိုင်းမှာ ဆံပင်က ညှပ်ကာစမို့ အရမ်း တိုနေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဟိုးအရင်ကတဲက သူ့ကို ဘဲဂေါင်းလို့ နာမည်ပြောင် ပေးထားတာပါ။ အဲ.... ဒီနေ့ ဆံပင်ညှပ်တော့လဲ ထုံးစံအတိုင်း သူညှပ်နေကျ ပုံစံဖြစ်တဲ့ မင်းသား ဒွေးကေ ပဲပေါ့။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာကြီးကလဲ လက်ရာကောင်းပါတယ် ထက်မြတ်သူကြိုက်တဲ့ ဒွေးကေပဲ ညှပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ထက်မြတ်သူ ဆံပင်ညှပ်ပြီးတဲ့တော့ ပြည်သိန်းအောင် ညှပ်မယ့်အလှည့် ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက မင်းသားဒွေးရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ သဲမောင်ကလည်း နာမည် စတက်နေပါပြီ ရုပ်ရှင်တွေ ကြော်ငြာတွေ အတော်များများ ရိုက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေခါနီး အချိန် (ယခု ဆံပင်ညှပ်ကြတဲ့အချိန်) လောက်ကျတော့ သဲမောင်ကနေပြီး သားညီဆိုပြီး နာမည် ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သိန်းအောင်ကလဲ မင်းသား ဒွေးရဲ့ညီ သားညီရဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို အလွန်ပဲ အားကျနေသူပါ။ အဲဒီတော့ သူကလဲ မင်းသား သားညီကေ ညှပ်မယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဆံပင်ညှပ်မယ့်ခုံမှာ အကျအန ၀င်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆံပင်ညှပ်ဆရာကြီးက ဘာပုံစံညှပ်မလဲလို့ ပြည်သိန်းအောင်ကို မေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြည်သိန်းအောင်က သူကြိုက်တဲ့ မင်းသား သားညီကေ ပုံစံအတိုင်း ညှပ်မှာမို့ ဆံပင်ညှပ်ဆရာကြီးကို "သားညီကေ ညှပ်မယ်" လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ ဆံပင်ညှပ်ဆရာကြီးက "ဟေ ... မင်းရဲ့ ညီ ဆံပင်ပုံစံကို ငါမှမသိတာ ... ဘယ်လို ညှပ်ရမှာလဲဟ" ဆိုပြီး ပြန်ပြော လိုက်ပါတော့တယ်။
(ကျွန်တော်တို့လဲ အလွန်ပဲ သဘောကျလွန်းလို့ ပြည်သိန်းအောင်နဲ့တွေ့တိုင်း မင်းညီကေ သွားမညှပ်တော့ဘူးလား ဆိုပြီး အမြဲစနောက် ဖြစ်ပါတယ်...တကယ်တော့ ဆံပင်ညှပ်ဆရာကြီးက မင်းသားသဲမောင် ကနေပြီး သားညီဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းထားတာကို လုံးဝမသိသေးတာပါ)
on September 05, 20093comments:
Labels: Funny, Remembrance
View of Melaka
Melaka ခရီးစဉျကို ပထမတဈခေါကျကတညျးက ရေးမယျရေးမယျနဲ့ အခုဒုတိယအခေါကျ ရောကျမှပဲ ရေးဖွဈပါတော့တယျ။ ကြှနျတျောမလကာကို ပထမအခေါကျစရောကျတုနျးကတော့ Private Tour အနနေဲ့ပါ။ Melaka က မိတျဆှတှေဖွေဈတဲ့ ကိုမငျးဇျောနဲ့ ကိုထှနျးထှနျးလငျးကပဲ အစစအရာရာကူညီခဲ့လို့ နရောအတျောမြားမြားကို ရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယအကွိမျအနနေဲ့တော့ 19.07.2009 ရကျနမှေ့ာ Smart Holiday Travel ကုမ်ပဏီနဲ့ Melaka ကိုသှားလညျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ယခုတဈခေါကျကတော့ Package Tour နဲ့ရောကျတာပါ။ Package Tour ဖွဈတဲ့အတှကျတော့ နရောတဈခုရောကျတိုငျး မိမိစိတျကွိုကျလလေ့ာဖို့ အခြိနျသိပျမရခဲ့ပါဘူး။ ပိုဆိုးတာ Kuala Lumpur ကနပွေီး နခေ့ငျြးပွနျခရီးဖွဈနတောပါပဲ။
on July 25, 20093comments:
စင်ျကာပူကိုရောကျရငျ သှာလညျဖို့ထိပျဆုံးစာရငျးထဲမှာ Sentosa ကြှနျးကအပါအဝငျပါ။ စင်ျကာပူရောကျတုနျး Sentosa ကြှနျးကိုသှားဖို့အတှကျ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ ဝသေူ့ကိုအကူအညီတောငျးပွီး လိုကျပို့ခိုငျးဖွဈပါတယျ။ ဝသေူကလဲကြောငျးပိတျတဲ့ရကျမို့ အဆငျပွပေါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ 8-2-2008 ရကျနမှေ့ာနံနကျ စာစားပွီးတာနဲ့ Dakota ကနပွေီး9နာရီလောကျက စထှကျဖွဈပါတယျ။ City Hall ကိုရောကျတော့ ဝသေူနဲ့တှပေ့ါတယျ။ ဝသေူကပဲဦးဆောငျပွီး MRT နဲ့ ခရမျးရောငျလိုငျးဖွဈတဲ့ North East Line ကနပွေီး Outram Park ကို MRT နဲ့သှားပါတယျ။ Outran Park ရောကျတော့ HarbourFont ကိုပွနျစီး။ HarbourFont Station ကိုတော့ တဈဘူတာပဲစီးရပါတယျ ဒီလိုနဲ့ပဲ HarbourFront Centre ကိုရောကျတော့ Sentosa ကြှနျးကိုသှားဖို့အတှကျ ဝငျခှငျ့ လကျမှတျကိုတနျးစီရပါသေးတယျ။
ဒီနေ့မနက် အီးမေးလ်အဟောင်းတွေထဲပြန်မွှေရင်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ပြန်ရှာတွေ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ဘလော့ခ်မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။
Famous Pagoda From Myanmar (Burma) Part - 3
Labels: Traveler Videos
ကျွန်တော့ဘလော့ခ်မှာ ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်သေးလို့ လာလည်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းများနဲ့ မိတ်ဆွေများကို လွန်စွာအားနာမိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့်အဆောင်မှာအတူနေတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ပို့စ်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကဗျာလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေးစေချင်လို့ ကျွန်တော့ဘလော့ခ်မှာ တင်ထားလိုက်တာပါ။ သူကတော့ နောက်ထပ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အားကျိုးမာန်တက် ရေးနေလေရဲ့ ......
ရေးသားသူ- ရွှေထုံး (ပျိုတို့မောင် ဧရာဝတီ)
စင်ျကာပူကို ပထမဆုံးအကွိမျရောကျတုနျးက မှတျတမျးလေးတှပေါ။ ဒီပို့ဈကို တငျမယျတငျမယျနဲ့ အခုမှပဲတငျဖွဈတာပါ။ စင်ျကာပူမှာက ကြှနျတေျာ့ငယျသူငယျခငျြး ထကျမွတျသူက အလုပျလုပျနတော ၁နှဈလောကျရှိပါပွီ။ ဟိုရောကျရငျတော့ သူ့ဆီမှာပဲတညျးမယျလို့ စိတျကူးထားတာ ဖွဈခငျြတော့ ကြှနျတျော သှားဖို့တဈရကျအလိုမှာ ဒီကောငျက အစာအိမျသှေးကွောပေါကျပွီး ဆေးရုံတကျရ ပါလရေော။ လာကွိုမယျ့သူမရှိတော့ ကြှနျတျောလဲ စိတျပူမိတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ပဲစင်ျကာပူကို Transtar Bus နဲ့ ည၇နာရီထှကျဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောရောကျမယျ့အခြိနျကလဲ ည၁၂နာရီဆိုတော့ MRT ပိတျခြိနျမို့ သူငယျခငျြးတှကေလဲ လာမကွိုနိုငျဘူး။ လမျးမှာသူငယျခငျြး စညျသူကဖုနျးဆကျပွီး လမျးညှနျပေးပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ စင်ျကာပူ Beach Road မှာရှိတဲ့ Golden Mile Complex ရောကျတော့ ည၁၂နာရီထိုးနပွေီ။ ကြှနျတျောလဲ Taxiငှားပွီး ထကျမွတျသူရဲ့လိပျစာကိုရှာရတော့တာပေါ့။ Taxi ကားမောငျးတဲ့သူက တရုတျလူမြိုး အဖိုးကွီးတဈယောကျပါ။ အတျောသဘောကောငျးပါတယျ။ Dakota Crescent ကိုသှားမယျဆိုပွီး လိပျစာပွတော့ သူကသိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Block နံပါတျကိုတော့ လှညျ့ပါတျရှာလိုကျရတယျ။ သူကလဲ စိတျရှညျရှညျနဲ့ ရှာပေးပါတယျ။ Taxi ခကတော့ S$5ပေးလိုကျရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ထကျမွတျသူအိမျရောကျတော့ ထကျမွတျသူရဲ့ဦးလေးက မအိပျသေးပဲစောငျ့နပေါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စင်ျကာပူမွကေို အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာနဲ့ပဲ ခွခေမြိပါပွီ။
on July 14, 2009 1 comment:
သံဃာတော် အရှင်မြတ်တို့အား မြတ်မာဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတို့၏ ထုံးထမ်းစဉ်လာနှင့်အညီ ဒါဆိုသင်္ကန်း စုပေါင်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၊ Taman Seri Sentosa ရှိ Kin Yap Plastic ကုမ္ပဏီတွင် ၅-၇-၂၀၀၉ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဆရာတော် သဒ္ဓမ္မောဒယမှ တရားတော်ဟောကြားမည်ဖြစ်ပြီး နံနက် ၁၀နာရီ ၃၀မိနစ်တွင် ဆရာတော်ထံသို့ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူမည်ဖြစ်၍ နံနက်၁၁နာရီတွင် ဧည့်သည်တော်များအား ကျွေးမွေးဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍အဆိုပါ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲသို့ Kin Yap Plastic ညီအကိုမောင်နှမများနှင့်အတူ တရားတော်နာယူပြီး လှူဒါန်းအပ်သောဒါနကုသိုလ် အစုစုတို့ကို လှူဒါန်းဆက်ကပ် အမျှဝေလိုသောကြောင့် အထက်ပါအစီအစဉ်တိုင်း ကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူးခြင်း၏ အနက်အဓိပါယ်ကို ဤနေရာတွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲတွင် လှူဖွယ်ဝတ္ထု အစုစု တို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များအတိုင်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်း ပူဇော်နိုင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ကိုမိုးဝင်း (Kin Yap Plastic)
Ph : +6012 3009810
ကိုမင်းသူဌေး (Kin Yap Plastic)
Ph : +6017 2730075
Labels: Donation Trip
on June 25, 2009 1 comment: